Nicholas Haysom oo Khudbad ka jeedinaya Shirka golaha amaanka – WIDHWIDH ONLINE
Nicholas Haysom oo Khudbad ka jeedinaya Shirka golaha amaanka
Published: January 3, 20198:12 am
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa galabta yeelanaya shir ay uga hadlayaan arimo dhowr ah ay kamid tahay xaalada Soomaaliya, waxaana shirkan khudbad ka jeedin doona Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom.
Shirka golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa arimaha looga hadli doono waxaa kamid ah xaalada Soomaaliya, waxaana shirka khudbad uu uga hadlayo xaalada Soomaaliya ka jeedinaya Nicholas Haysom .
Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa la filayaa in khudbada uu shirka golaha amaanka ka jeedinayo uga hadlo arrimaha siyaasadda, bani’aadanimada iyo xuquuqul Insaanka, waxaa sidoo kale la filayaa in uu ka hadlo dhacdooyinkii ka dhacay Baydhabo.
Shirka golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb galaya Wakiilka joogtada ee Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobey Amb. Abuukar Baalle, axaana la filayaa Baalle in uu jeediyo khudbad uu ku difaacayo dowlada.
Shirka ay yeelanayaan golaha Amaanka ayaa kusoo aadaya xili dowlada federaalka ay dalka ka ceyrsisay Wakiilkii Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya oo lagu eedeeyay in uu ku xad gudbay jaritaanka Qaranimada Soomaaliya.
Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay Magalada Muqdisho
Published: April 22, 201911:02 am